IBC 2019 တွင်အကြောင်းအရာဖန်တီးရန်အတွက် Cloud Web Workflows အသစ်များကို Amazon Web Services Inc. မှပြသမည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » အမေဇုံက Web Services က Inc က IBC 2019 မှာအကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်းသည်နယူး Cloud Workflows ခင်းကျင်းပြပေးပါလိမ့်မည်
မည်သည့်မီဒီယာကုမ္ပဏီနှင့်အတူ, ထို့နောက်ထိရောက်သောနှင့်အလွန်အမင်းစိတ်ကြိုက်အကြောင်းအရာဖန်တီးမှုကိုအမြဲတစ်ဦးခေတ်မီဖက်ရှင်မှာသူ့ဟာသူစျေးကွက်နိုင်ရန်အတွက်မရှိမဖြစ်အချက်တခုဖြစ်ပါသည်။ IBC 2019 ကျေးဇူးတင်လျှင်မြန်စွာချဉ်းကပ်၏, နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကမီဒီယာကုမ္ပဏီများ, ဖန်တီးနိုင်ပါလိမ့်ထုတ်လုပ်ရန်နှင့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုနှင့်နေရာတိုင်းပိုမြန်သောအကြောင်းအရာများကိုအပ်မည် AWS (အမေဇုံက Web Services က Inc မှ) ။ IBC 2019, AWS မှာယခုနှစ်တွင်အထူးအမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးအကြောင်းအရာဖန်တီးမှုချောမွေ့ခြင်းနှင့်စာတန်းထိုး, personalization နှင့်လိုက်နာမှုအာရုံစိုက်ပိုမိုအဆင့်မြင့် AI အ-based စက်သင်ယူမှု Workflows များ၏ပို့ဆောင်မှုကို enable ဖို့ဒီဇိုင်းနည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုတွေတခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဤရွေ့ကားဆန္ဒပြပွဲများသူတို့ထိထိရောက်ရောက်, ပိုကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာဖွံ့ဖြိုးသစ်ကိုပြုသောပူဇော်သက္ကာလုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့, အလိုအလျောက်အတူ backend ဖြစ်စဉ်များချောမွေ့, ကာကွယ်ပေး, စတိုးဆိုင်, နှင့်လျော့နည်း overhead ရှေ့နောက်မညီနဲ့အတူပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပုံကိုဖောက်သည်ကိုပြသပါလိမ့်မယ်။
AWS IBC 2019 ပြပွဲ
IBC 2019 မှာ AWS ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲများအများအပြားပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ်:
Next ကို-မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ Encoding ပြီးတော့ဗီဒီယိုထုတ်ယူခြင်း
မိုဃ်းတိမ်၌ unified Headend
Animation ရဲ့, VFX ၎င်း, တည်းဖြတ်သည်မိုဃ်းတိမ်၌စတူဒီယို
ultra-အနိမျ့ latency တိုက်ရိုက်ဗီဒီယို
source-to-screen ကိုတိုက်ရိုက် OTT streaming များ
Serverless Channel ကိုဖန်ဆင်းခြင်း
ဒါဟာဖြေရှင်းချက်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနှင့် On-demand အကြောင်းအရာကဲ့သို့သောများအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ဗီဒီယိုက encoding ကနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့နည်းပညာများသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ်:
AV1 ဗီဒီယို Compression ကို
ဘုံမီဒီယာလျှောက်လွှာ Format ကို
အရည်အသွေး-သတ်မှတ်ထားသော Variable Bit Rate ထိန်းချုပ်ရေးအနာဂတ်-အထောက်အထားအဆိုပါနည်းပညာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု
ဤသည်ပိုပြီးရိုးရာ OTT ကဗီဒီယိုလုပ်ငန်းအသွားအလာအညီအမျှအဆိုပါလုပ်ငန်းလည်ပတ်သွက်လက်နှင့်လျှော့အခြေခံအဆောက်အအုံကုန်ကျစရိတ်ကိုထောက်ပံ့နေချိန်တွင်မိုဃ်းတိမ်နှင့်ထံမှတိုက်ရိုက်အကြောင်းအရာကယ်လွှတ်ခြင်းငှါအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဦး AWS ဖြေရှင်းချက်အမျှမီဒီယာ-To-Cloud ကိုရွှေ့ပြောင်းခြင်းများပါဝင်သည်ကြောင်းန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူအကြောင်းအရာရှာဖွေခြင်းနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုမြှင့်တင်ရန်ကြောင်း built-in metadata ကို tools များနှင့်အတူမိုဃ်းတိမ်သို့အကြောင်းအရာမော်ကွန်းတိုက်၏တစ်ဦးထက်ပိုရိုးရှင်းသောရွှေ့ပြောင်းဘို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်:
ဤသည် AWS ဖြေရှင်းချက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကာတွန်း၏ပူးပေါင်းနှင့် VFXpost-ထုတ်လုပ်မှုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအဘို့အခွင့်ပြုထားသောမိုဃ်းတိမ်၌တစ်ဦးဖန်တီးမှုစတူဒီယိုတခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဤအုပ်စုအားထုတ်မှုကနေကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များပါဝင်သည်လိမ့်မည်ဟုဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူတစ်ကမ္ဘာလုံးအရင်းအမြစ်များ, ကို virtual စက်နှင့်ဒေတာသိုလှောင်မှုချုံ့ချဲ့ခြင်းနှင့် rendering အတွက်သွက်လက်နှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၏ကြီးမြတ်သောအကွာအဝေးနှင့်အတူဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာဖန်တီးပါလိမ့်မယ်:
AWS Thinkbox နောက်ဆုံး
အမေဇုံ EC2 G3 ဥပမာအားဖြင့်
အမေဇုံ elasticity Compute တိမ်တိုက် (EC2) Spot ဥပမာအားဖြင့်
စက်မှုဝန်ကြီးဌာနအဘိဓါန် Standard ကို Creative Tools များသည် per-Minute အလိုင်စင်
ဒီဖြေရှင်းချက်များတွင် AWS ဒြပ်စင် MediaStore နှင့် အမေဇုံ CloudFront ကိရိယာကင်မရာကနေခွဲသုံးစက္ကန့်အောင်းနေချိန်ဆည်းပူးဖို့ chunked CMAF encoding ကထောက်ပံ့ပေးကြောင်းတိုက်ရိုက်လွှင့်သောဗီဒီယိုလုပ်ငန်းအသွားအလာကျောက်ချရပ်နားပါလိမ့်မယ်။
source-To-Screen ကိုတိုက်ရိုက် OTT လွှ
ဤသည်ကိုတိုက်ရိုက်-to-ကြည့်ရှုသူ AWS ဖြေရှင်းချက် over-the-ထိပ်ဖျားနဲ့ဒဏ်ခံ (OTT) ဗီဒီယိုကိုဖြန့်ဝေခြင်း, အဆုံးမှအဆုံးသို့တိုက်ရိုက်လွှင့် Workflows ကယ်နှုတ်တော်မူပါလိမ့်မယ်။
ဤတွင် AWS ကဲ့သို့သောစိတ်ကြိုက်ကြော်ငြာဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူတည်ဆောက်ခြင်း, ကိုယ်ပိုင်ပရိုဂရမ်များနှင့်ကြော်ငြာချန်နယ်ထူးခြားတဲ့ချဉ်းကပ်မိတ်ဆက်ပေးဦးမည် AWS ဒြပ်စင် MediaTailor နှင့် အမေဇုံကိုယ်ပိုင်.
Artificial Intelligence / စက်သင်ယူ Solutions
ဤရွေ့ကားထုတ်လုပ်မှု-အဆင်သင့်ဖြေရှင်းချက်ကိုလိုက်နာမှု, ဖြည့်ညှင်းနှင့်ဒေသတွင်းမူပြောင်းခြင်းများအတွက်အလိုအလျောက်အကြောင်းအရာပြင်ဆင်မှုများကိုပါလိမ့်မယ်။ ဤအဖြေရှင်းနည်းများတွင်ထည့်သွင်းခံရဖို့အပိုဆောင်း features တွေကို real-time ကူးယူ, စာတန်းဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ဟုအမည်ပေးထားသည့် Multi-ဘာသာစကားစာတန်းထိုးဖြစ်လိမ့်မည်။
ဖြတ်. AWS ဒြပ်စင် MediaConnect, ဒီဖြေရှင်းချက်ကိုအလွယ်တကူသယ်ယူပို့ဆောင်ငွေရရှိအောင်လျက်, မိုဃ်းတိမ်မှတဆင့်ကနေမှအရည်အသွေးမြင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဗီဒီယိုကိုဖြန့်ဝေရန်အသုံးပြုသူများအား enable တံ့သောအကြောင်းအရာသစ်စုစည်းမဟာဗျူဟာများ, သော့ဖွင့်ပါလိမ့်မယ်။
ယခုမှတ်ပုံတင်မည် IBC 2019။ ဒါဟာမှာကျင်းပပါလိမ့်မည် RAI အမ်စတာဒမ်ကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ အမ်စတာဒမ်အတွက်စက်တင်ဘာလ 13-17, 2019 နှင့် AWS အပေါ်အဆိုပါနယ်သာလန်မှာကျင်းပပါလိမ့်မည် မတ်တပ်ရပ် 5.C80။ AWS အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူနှင့်တစ်ဦးချင်းစီ, ကုမ္ပဏီများနှင့်အစိုးရ On-demand cloud computing ပလက်ဖောင်းကိုထောက်ပံ့ပေးမည်သို့ပြီးတော့ထုတ်စစ်ဆေး aws.amazon.com.
အမေဇုံ အမေဇုံနား အမေဇုံ Rekognition အမေဇုံစာသားစကား အမေဇုံက Web Services က Inc မှ အမ်စတာဒမ် AV1 ဗီဒီယို Compression ကို AWS မိုဃ်းတိမ်ကို ဘုံမီဒီယာလျှောက်လွှာ Format ကို အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း အကြောင်းအရာ-သိ-Encoding ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana IBC IBC 2019 မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး OTT အသံလွှင့်ကုန်တင်ကားအပြင်ဘက်တွင် RAI အမ်စတာဒမ်ကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ SageMaker လှံ & Arrows စာတန်းထိုး နယ်သာလန် 2019-09-09
ယခင်: Medialooks IBC2019 မှာ Market ကအဆင့်မြှင့် Software Development Tools များဆောင်ကြဉ်း
နောက်တစ်ခု: IBC မှာမိတ်ဆက်အဆင့်မြင့်ထူးခြားချက်များစက်ရုပ်အောကျခံခုံမှရွှေ့လျားစှမျး Add, ထိုဇုန်အတွက် Shotoku ရဲ့ TR-XT ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်ထားပါ, နှင့်၎င်း၏မျက်နှာကျက်တပ်ဆင်ထားရထားစနစ်အဘို့ခေါင်မိုးဖိအားပေးရန်